Abanini baseCanada kunye noMbutho wabaqhubi beenqwelomoya kwiibhulorho phakathi kwesiko kunye nomoya okude
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Abanini baseCanada kunye noMbutho wabaqhubi beenqwelomoya kwiibhulorho phakathi kwesiko kunye nomoya okude
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • Xanduva • Technology • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Umbutho omkhulu waseCanada wokuhamba ngenqwelomoya wazisa ukhetho lobulungu beedrone.
I-COPA yazisa ngobulungu obutsha ekukhetheni uluntu olukhulayo lwedrone
Iidrones ziguqula kakhulu ilizwe lenqwelomoya, kwaye njengoko le teknoloji intsha iguquka, iya kuba njalo nendima yayo eluntwini
Iinqwelomoya ezilingwayo ezikude ziguqula amashishini aseCanada
The Umbutho wabanini beCanada nabaqhubi beenqwelo moya (COPA) -Umanyano omkhulu wokuhamba ngenqwelomoya eCanada-yazisa ngobulungu obutsha ekukhetheni uluntu olukhulayo lwedrone.
Iidrones ziguqula kakhulu ilizwe lenqwelomoya, kwaye njengoko le teknoloji intsha iguquka, iya kuba njalo nendima yayo eluntwini. Iinqwelomoya ezikude zikwatshintsha amashishini aseCanada, zenze ukuqonda okutsha kunye namandla kulawulo lwentlekele, ukukhangela kunye nokuhlangula, iziseko zophuhliso kunye namanye amashishini angenakubalwa.
Njengenkokeli ethembekileyo ekuqhubekeni nasekukhuthazeni ukhuseleko lweenqwelomoya, kwaye njengelizwi elaziwa ixesha elide kuhambo jikelele e-Canada, i-COPA ibekwe ngokukodwa ukuba imele abaqhubi beenqwelomoya abaqhelekileyo nabakude. Eyona njongo iphambili yokudibanisa olu luntu kunye kukuxhasa iinzame eziqhubekayo zeCOPA zokudityaniswa okukhuselekileyo kwabo bonke abasebenzisi bendawo yomoya. Abaqhubi beenqwelomoya abaqhelekileyo nabakude babelana ngemidla efanayo kukhuseleko nasekukhuseleni inkululeko yabo yokubhabha.
I-COPA ibibandakanyeka kwiidrones kunye nemicimbi enxulumene nayo iminyaka eliqela. Umbutho wenze igalelo kuphuhliso lwezixhobo ezithandwayo ze-RPAS, kubandakanya neBhunga leSizwe loPhando laseKhanada ngesixhobo sokukhetha indawo yedrone kwaye ubambisene nomlawuli weenqwelomoya waseCanada ukuxhasa amalinge okwazisa ngemfundo.
Ekuqwalaseleni ukubaluleka kokudityaniswa okukhuselekileyo kweenkqubo zeenqwelomoya ezilingwayo ezikude (RPAS) kwindawo yomoya yaseCanada, iCOPA ijolise ingqalelo yayo kwezi ndawo zilandelayo: Uqeqesho lokuqhuba kwenqwelomoya kunye nokuqinisekiswa; Ulawulo lweTrafikhi ye-RPAS (RTM); Ngaphandle kwemisebenzi yokuBonwa kweMiboniso (BVLOS); Ukufaneleka komoya kwi-RPAS; ukubona kwaye uphephe; ukukhangela nokuhlangula; kunye nokuvela kwesizukulwana esilandelayo se-RPAS.
"Njengokuba abaqhubi beenqwelomoya be-RPAS beqhubeka nokwenza indawo yabo kwezokuhamba ngenqwelomoya, i-COPA izakuxhasa ngokubonelela ngezixhobo kunye noluntu bonke abaqhubi beenqwelomoya abafuna ukuphucula amava abo okubhabha," utshilo uChristine Gervais, uMongameli kunye ne-CEO ye-COPA. "Eli lelona xesha lilungileyo lokwamkela izinto ezintsha kwezokuhamba ngenqwelomoya, ngakumbi uninzi lwendalo ngenqwelomoya.
“Ukwamkela uluntu lwedrone kuyakomeleza icandelo leenqwelo moya. Kwaye ngelixa uloyiko lwaba basebenzisi bendawo yomoya lukhona, kukho izibonelelo ezininzi zokufumana injongo efanayo phakathi kwendalo kunye nokuhamba ngenqwelomoya okude. Aba bafikayo esibhakabhakeni bethu bayaqala, kwaye i-COPA izakunceda ukuvula amandla amakhulu obu buchwephesha bokubhabha.